“သင်သံဓာတ်ချို့တဲ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၉)ခု “ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကျန်းမာရေး VIDEO များ
ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းများ
“သင်သံဓာတ်ချို့တဲ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၉)ခု “
“ သင်သံဓာတ်ချို့တဲ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၉)ခု “
အကြောင်းမဲ့လို့ဆိုရာမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လောက်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့အလုပ် လှုပ်ရှားမှုမျိုးမရှိပေမယ့် …. သိသိသာသာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေခြင်းမျိုးပါ။သံဓာတ်ချို့တဲ့သူ အယောက်၁၀၀ရှိရင် အယောက်၅၀ကျော်(ထက်ဝက်ကျော်)လောက်က ဒီလက္ခဏာကိုခံစားရပါတယ်။အားနည်းခြင်း၊စိတ်မကြည်ခြင်း၊အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း စတာတွေလည်း တွဲဖက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အောက်မျက်ခွံအတွင်းဖက်က သာမန်လူလို နီရဲမနေဘဲ ဖြူဖျော့နေနိုင်တယ်။မျက်နှာ၊သွားဖုံး၊ပါးစပ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ လက်သည်းတွေလည်း ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ဒီလက္ခဏာဟာသာမန်သံဓာတ်ချို့တဲ့သူထက် သံဓာတ်သိသိသာသာ ချို့တဲ့သူများမှာ ပိုတွေ့ရတယ်။
လမ်းလျှောက်၊လှေကားတက် စတဲ့ သာမန်နိစ္စဓူဝလှုပ်ရှားမှူလေးတွေမှာတောင် အသက်ရှူမဝ၊မောနေမယ်ဆိုပါကလည်း သံဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းကို သံသယဖြစ်ဖို့လိုနေပါပြီ။
သံဓာတ်ချို့တဲ့တဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ကို အောက်စီဂျင်သယ်ပို့ပေးမယ့် သွေးနီဥတွေကောင်းစွာမဖြစ်ပေါ်နိုင် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ရလဒ်အနေနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ခေါင်းမူးခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲအလားတူပဲ …သံဓာတ်ချို့တဲ့မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးတစ်ရပ်အနေနဲ့ နှလုံးအတွကမ အောက်စီဂျင်အလုံအလောက်မရတဲ့အခါ ရင်တုန်ခြင်း၊နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းများမှစလို့ အချိန်မီကုသမှုမပြုနိုင်ခဲ့ပါက နှလုံးကြီးခြင်း၊နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းစတဲ့ ကြီးမားတဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
၆။ဆံပင်ဆံသားနှင့် အသားအရည်ခြောက်သွေ့ပျက်စီးခြင်းများသည်လည်းပဲ သံဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတစ်ခုပါ။
၇။ဆေးခန်းသွားတဲ့အခါ ဆရာဝန်တွေ လျှာထုတ်ပြခိုင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကလည်း သံဓာတ်ချို့တဲ့ မတဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးတာပါ။လျှာတွေရောင်ရမ်းနေမယ်၊အရောင်အားဖြင့်ဖျော့တော့နေမယ်၊အရသာခံအဖုလေးတွေမရှိတော့ဘဲ လျှာဟာဗြောင်ချောကြီးဖြစ်နေမယ်….ပါးစပ်တစ်ခုလုံးခြောက်သွေ့နေမယ်၊ပါးစပ်ထောင့်နားလေးတွေမှာ နီရဲကွဲအက်နေမယ်၊ပါးစပ်မှာအနာတွေဖြစ်နေမယ်…ဆိုရင် သံဓာတ်ချို့တဲ့နေကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်ပါပဲ။
၈။သင့်လက်သည်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။လက်သည်းတွေကြွပ်ဆတ်ကျိုးလွယ်နေမယ်၊ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အားဖြင့်လည်း ထမင်းစားဇွန်းကဲ့သို့ ခွက်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသံဓာတ် လုံလောက်မှုရှိ မရှိ စစ်ဆေးသင့်နေပါပြီ။
-ထူးခြားတဲ့ချဉ်ခြင်းတက်ခြင်းများ(ဥပမာ – ရေခဲ၊မြေဖြူ၊စာရွက်၊ဖုန်မှုန့်၊ရွှံ့စေး စတဲ့ စားစရာမဟုတ်တာတွေကို စားချင်နေတာမျိုး)
ပိုင်နီမေ (ဆေး ၂)
ယောဂကျင့်ထုံး (Yoga)ရဲ့ ကောင်းကျိုးအသွယ်သွယ်
JPN 600 (သို့မဟုတ်) ဂျပန်ကလာတဲ့ သက်တော်စောင့်?
The most common form of depression
By Aung Kyaw Pai
လူပြောများနေသော စိတ်ကျရောဂါ ဒီနေ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲကြားနေကျ စကားတခုကတော့ “ ငါ Depression ဝင်နေတယ်ကွာ” ဆိုတာပါ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါ၊ အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါ၊ အိမ်ထောင်ပြတ်ဆဲသွား တဲ့အခါ စိတ်ဝမ်းနည်းပူဆွေးတာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ဒါဟာ depression မဟုတ်ပါဘူး။ Depression…
သဝန်တိုစိတ်လွန် စိတ်ရောဂါ သဝန်တိုစိတ်ဆိုတာ မြင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကောင်လေး/ကောင်မလေး ပြေးမြင်လိုက်ပြီဆို စိတ်မကောင်းပါဘူး သဝန်မတိုရအောင် နေနေရတဲ့ ဘဝကို စာနာပါတယ် …ဟုတ်ပါတယ်…သဝန်တိုစိတ်ဆိုတာ လူတိုင်းဆီမှာ ရှိတတ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်ပါ…ထပ်ပြောရရင် ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဆီမှာ အများဆုံးရှိတတ်တဲ့ အရာတစ်ခု ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး….FA တွေကတော့ ကံကောင်းပါတယ်…
စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ ( schizophrenia) သင်ဟာ ဆေးပညာအသိုုင်းအဝိုင်းနဲ့ နီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဆို ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်၊ အတိုကောက်အနေနဲ့ စကစ် (schip) လို့ခေါ်ကြတယ်၊ မသိတော့ (skip) လိုလို အထင်မှားကြတယ်။ မှားလဲ မှားစရာပါ၊ ခံစားနေရတဲ့သူတွေ ကလဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတမဖြစ်ပဲ ပယ်ထားခံရသူတွေများပါတယ်။…
myDoctor ၏ဖိုရမ်ဂဏ္ဍကို ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်သူ/သားများအကြား ရင်းနှီးစွာထိတွေ့ဆက်ဆံမူပိုမိုလာစေရန် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဖိုရမ်ဂဏ္ဍများစွာစီစဉ်ထားသဖြင့် မိမိစိတ်ဝင်စားရာဂဏ္ဍအလိုက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေး နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။About
© Copyright 2012 - 2021 | MY DOCTOR by UMG IDEALAB TECH INCUBATOR | All Rights Reserved | ( K -18, NWETHARKI STREET, BAYINTNAUNG PWALYON, MAYANGON TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR )